जब श्रीमानले ‘मेरो घरबाट तँ निस्केपछि मात्र म घर फर्किन्छु’ भने…
जनतापाटी २३ माघ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग र दुरुपयोग मान्छेको सोचाईमा भर पर्ने कुरा हो । फेसबुक, ईमो, भाईबरलगायतका सामाजिक सञ्जालले मनहरु जोडेका मात्र छैनन् घरहरु तोडेका पनि छन् ।
सहि रुपले चलाउन सकेयसका फाईदा निकै छन् । तर यसको थोरै मात्र दुरुपयोग भए यसबाट आईपर्ने समस्या चर्को छ । सामाजिकसञ्जालकै कारण चर्को समस्यामा परेकी छन् बुद्धिमाया सुनार ।
बुद्धिमायाको बिहे भएको ११ बर्ष भयो । उनका ३ छोरी छन् । श्रीमान नेपालमा रहँदा ज्याला मजदुरी गर्दथे ।पहिलो २ सन्तान हुँदा नै परिवार पाल्न गाह्रो थियो । तेश्रो सन्तान समेत थपिने भएपछि आर्थिक दवाव अझ बढ्यो ।
त्यसैले परिवार पाल्न कमाई पनि बढाउनु पर्ने भयो । दुईजनाको सल्लाह भयो, बढी कमाउने विकल्प बैदेशिकरोजगार ठाने उनीहरुले । गाउँकै एउटा समुहबाट १ लाख २० हजार ऋण लिएर बुद्धिमायाका श्रीमान मलेशिया उडे ।
अब सुखका दिन आउने कल्पनमा थियो । दिनहरु बित्दै गए । श्रीमानले बिदेश पुगेर केहि महिनासम्म उनलाईफोन सम्पर्क पनि गरिरहे । श्रीमान उडेको ५ महिना पछि उनीहरुकी तेश्रो सन्तान छोेरी जन्मिइन् ।
तर विस्तारै विदेशबाट श्रीमानको फोन पातलिंदै जान थाल्यो । जव विदेशबाट श्रीमानको फोन आउने क्रम कम हुँदैगयो, बुद्धिमायाले नेपालबाट फोन गर्ने क्रम बढाइन् ।
केहि समयसम्म नेपालबाट श्रीमतिले गरेको फोन उठाउने उनका श्रीमान अव विस्तारै फोन पनि उठाउन छोडे । सम्वन्धको डोरी कमजोर हुँदै गयो । यसरी अकस्मात श्रीमानको व्यवहार फेरिएपछि बुद्धिमायाको मनबिचलित भयो ।
उनी धेरै कुरा सोच्दथिन् कतै तेस्रोे सन्तान छोरी भएकैकारण पो सम्पर्क गर्न छोडेका हुन की ? अथवा परदेश पुगेपछि अरुसँग नैमाया पो गाँसे की ? यस्तै आशंका र प्रश्नहरुले उनको मनमा डेरा जमाउनथाल्यो ।त्यसैले परिवार पाल्न कमाई पनि बढाउनु पर्ने भयो । दुईजनाको सल्लाह भयो, बढी कमाउने विकल्प बैदेशिकरोजगार ठाने उनीहरुले । गाउँकै एउटा समुहबाट १ लाख २० हजार ऋण लिएर बुद्धिमायाका श्रीमान मलेशिया उडे ।
यस बिचमा उनको एकजना केटा साथीसँग फेसबुकमा चिनजान भयो । बिस्तारै कुराकानीको क्रम बढ्यो । उसले पनि उसका दुःखका कुरा गथ्र्यो,बुद्धिमायाले पनि आफ्नो दुःखको । कुराकानी यसरी नै भईरह्यो ।
दैनिकरुपमा उनीहरु कुराकानी गर्थे । तर अचानक ४ बर्ष पछि श्रीमानलेबुद्धिमायालाई फोन सम्पर्क गरे र ७ हजार पैसा पनि पठाए । उनले केहिसोच्न सकिनन् । सायद श्रीमानको माया आफुप्रति पलायो भन्ने ठानिन् र खुसी भईन ।
फोन सम्पर्क हुन थालेको ६ महिना पछि अचानक श्रीमानले बुद्धिमायासँग अब नयाँ तरिकाले जिन्दगी अगाडीबढाउ, मैले बिचमा तिमिलाई सम्पर्क नगरेर गल्ती गरे, अब म सधैं बच्चा र तिम्रो खुसी चाहन्छु भन्दै एउटा प्रस्तावराखे । अवदेखि हामीले एउटै फेसबुक एकाण्ट प्रयोग गरौ ।
बुद्धिमायाले सोचिन् मैले गल्ती केहि गरेको छैन । यदि फेसबुक आईडी श्रीमानलाई दिएर सम्बन्ध सुधार हुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भन्दै उनले फेसबुक आईडी श्रीमानलाई दिईन ।
साथै आफ्नो एकजना केटा साथीसंग कुरा हुने तर उसलाई आफुले नचिनेको फेसबुकबाट मात्र भेटेको कुरा श्रीमानलाई जानकारी गराईन । श्रीमानले बिदेशबाट सम्पर्क त नियमित रुपमा गर्न थाले तर त्यहि केटा साथीको कुरालाई लिएर श्रीमतीलाई मानसीक यातना दिन थाले उनले ।
उनले तँ त्योसंग बोलेको मात्र होईन होला, तिमीहरुको बिचको सम्बन्धको हद कतिसम्म थियो, भेट त भयो होला जस्ता प्रश्नको प्रत्येक पटक जवाफ माग्न थाले । गर्दा गर्दै बुद्धिमायालाई त्यसैसंगजा, मेरो घरबाट निस्की, तँ हिडे पछि मात्र म घर फर्किन्छु भन्न थाले उनी ।
आज बुद्धिमाया नखाएको बिषका कारण घरबाट निस्कीन बाध्य भएकी छन् । उनी माईतीको शरणमा छन् । तर ३ सन्तानको लालनपालन, उनीहरुको शिक्षा दिक्षा उनका लागि चुनौती बनिरहेको छ । त्यसैले परिवार पाल्न कमाई पनि बढाउनु पर्ने भयो । बैदेशिक रोजगारी देशको अर्थतन्त्र धान्ने एउटा महत्वपुर्ण पाटो हो । तर बैदेशिक रोजगारले जसरी परिवार,मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ, सामाजिक मूल्य पनि उस्तै चुकाउनु परिरहेको छ । नेपालमा पैसा त भित्रियो, तरत्यहि पैसा भित्राउने परिवारले भोग्नु परेको सामाजिक लागत चर्को छ ।
श्रीमानले कमाएर पठाएको पैसा लिएर श्रीमति अर्कैसँग हिंडि भन्ने समाचारले प्राथमिकता पाउँदा विदेशमा बस्नेश्रीमानले दिएको चर्को मानसिक यातना भोग्न बाध्य महिलाहरुका बारेमा भनें उति धेरै बहस, छलफल भइरहेकोछैन । फलस्वरुप थुप्रै बुद्धिमायाहरु अनावश्यक लाञ्छनाको शिकार भइरेका छन् । यो अवस्थाका बारेमा पनिगम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
लेखकको निधनप्रति कांग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त